Hiverina an-tanindrazana, anio: hakotrokotroka ny fitsenana ny Barea | NewsMada
Higadona eto an-tanindrazana, anio amin’ny 3 ora tolakandro, ny ekipam-pirenena, ny Barea an’i Madagasikara. Fitsenana makotrokotroka no hiandry azy ireo, hiara-hirona ny Malagasy rehetra hiventy ny hoe “Misaotra Barea”.
Nahavita ny andraikitra goavana nanirahan’ny vahoaka malagasy azy ireo, tany Egypta: ny hiaro sy hanandratra avo ny voninahi-pirenena, ny Barea, ka ho avy eto an-tanindrazana hitondra ny fandresen’i Madagasikara sy hankasitraka ny Malagasy sy ny mpanohana rehetra, eny na lavo teo amin’ny ampahefa-dalana aza. Dingana izay tsy azo noeritreretina mihitsy hoe ho tongan’ny Barea, tamin’ity fandraisana anjara voalohany amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika iny, kanefa vitan’ny ekipantsika. Mendrika fisaorana lehibe izany ary hiara-hirona ny Malagasy hisaotra ny Barea, anio, mandritra ny fitsenana eny Ivato ary hanaraka amin’ny lalana rehetra holalovan’ny Barea eto Antananarivo.
Araka ny fandaminana, hamakivaky manerana an’Antananarivo ny Barea sy ny mpitsena azy, anio, ka hisy ny “cortège”, avy eny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato, mihazo ny lalam-baovao, Tsarasaotra, Alarobia, Ankorondrano, Antanimena, Analakely, Ambohidahy, ary hifarana eny Mahamasina. Marihina fa hijanona roa andro eto an-tanindrazana ny Barea ary hisy ny fandraisan’ny filoha Rajoelina Andry azy ireo, eny amin’ny lapan’Ambohitsorohitra, avy eo, eny amin’ny lapan’Iavoloha, amin’ity faran’ny herinandro ity. Hisy ny fiaraha-misakafo sy ny lanonana ho fisaorana ny Barea, mandritra izany, araka ny fandaharam-potoana hatrany.
Tsy ho avy i Anicet sy i Metanire
Araka ny fampitam-baovao mivantana avy amin’ny mpilalao, i Abel Anicet, tsy ho isan’ireo hotsenaina eny Ivato izy, noho ny tsy fahafahana miaraka amin’ireo mpilalao namany. “Amin’ny fo feno alahelo no ilazako anareo fa tsy afaka higadona an-tanindrazana rahampitso ny tenako, satry dia satry hahita anareo sy ny fianakaviana hizara hafaliana fa indrisy, nantsoina maika dia maika hody any Bulgarie aho hamonjy ny fanomanana ny lalao miverina amin’ ny ”Qualification Ligue des Champions”, hatao ny alarobia ho avy izao”, io ny nambaran’i Anicet, talohan’ny niaingany tany Egypta, hihazo an’i Bulgarie. Tsy afaka hiara-higadona amin’ny ekipa rehetra ihany koa i Metanire, hihazo avy hatrany an’i Etazonia, araka ny nambarany, saingy nanentana ny Malagasy izy mirahalahy mba ho tonga maro, hitsena ny maherifon’i Madagasikara.